Iskuuladan waxay hogaaminayaan magaalada siinta dhamaan caruurta - iyadoo aan loo eegeyn asalkooda - waxbarasho weyn. Liiskani wuxuu ku saleysan yahay Qiimaynta Buuxda ee Minnesota, ama “MCAs” –da aaladda gobolkaaga si loogu fahmo sida ay iskuulada wax u bartaan carruurta.
Ardayda dhigata iskuuladaan ee ka soo jeeda dakhligoodu hooseeyo waxay tacliin ahaan ka sareeyaan celceliska iskuulada dadweynaha ee Minneapolis & / ama waxay ku korayaan aqoon ahaan si xawli ah marka loo eego celceliska. Ardayda asal ahaan dakhligoodu hooseeyo, oo dhigta dugsiga sare ee isbeddelada u eg, waxay sidoo kale leeyihiin heerar aad u sareeya oo qalin-jabinta & isqorista kuliyada marka loo eego kuwa dhiggooda ah.
Nidaamiyaasha siyaasada, u doodeyaasha & barayaasha waxay fiiriyaan MCAs si ay u fahmaan sida ardayda, guud ahaan, ay ula jaan qaadaan heerarka heerka fasalka & awooddeena ku aadan xiritaanka fursadaha ugu xun ee dalka "fursadaha."
Sababtoo ah gobolka Minnesota ma maamulo MCA-gii gu'gii 2020-taas oo ay ugu wacan tahay COVID-19-waxaan ku abaalmarinaynaa u-beddelashada-u-qalmitaanka sannadkan isla dugsiyada hoose & kuwa dhexe sida daabacaadda raadiyeyaasha iskuulka ee 2020-21.
Talo: Markaad sahamineyso astaamaha iskuulka oo aad booqaneysid iskuulada, weydii sida caruurtaada kuwaaga oo kale ah ay u sameynayaan tacliin ahaan & marka la barbardhigo ardayda kale ee dugsiga ee leh taariikh kala duwan.
Anaga oo xoogga saareyna iskuulada, waxaan si gaar ah ugu go’aansan nahay in aan u badalno sinaanta waxbarashada ardayda oo dhan, isirka, iyo asalkaba. Waxaan gacan ka geysaneynaa abuuridda iskuullo badan oo shaqeynaya, hubinta isku xirnaan, waxbarasho la xiriirta oo haqab tirta baahiyaha waxbarasho ee kala duwan ee ardayda.
Iyo, anagoo la shaqeyna la-hawlgalayaasha bulshada, waxaan waalidiinta ka caawinnaa sameynta go'aanno diiwaangelin oo wargelin leh iyo u doodidda carruurtooda ee dugsiyada dhexdooda.
© 2021 Minneapolis School Finder. Design by New Publica, Horumarinta by RED.
Sida loo isticmaalo barta